प्रेमिकालाई खास महसुस गराउन यी चीजमा ध्यान दिनुहोस् !स्पेसल टिप्स ,भ्यालेन्टाइन वीकमा ,…. – News Nepali Dainik
प्रेमिकालाई खास महसुस गराउन यी चीजमा ध्यान दिनुहोस् !स्पेसल टिप्स ,भ्यालेन्टाइन वीकमा ,….
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २७, २०७७ समय: २०:०७:४७
महिलाहरुले आफ्नो अनुहार, कपडा लगायत सबै कुराको विशेष ख्याल राख्छन्। तर केटाहरू गर्दैनन् ? यसको जवाफ हो हुनसक्छ। किनकि भ्यालेन्टाइनको पूरै हप्ता केटाहरू शानदार देखिन्छन्। तर पनि यस्तो धेरै पटक हुन्छ कि उनीहरुको लुक्समा केहि न केहि कमी रहन्छ।
तर अब तपाईं चिन्तित हुनु पर्दैन, आज हामी तपाईंलाई यस्ता उपायको बारेमा बताउँछौं जसले तपाईंको लुक्स सुधार्नुका साथै तपाईंको प्रेमीकालाई खास पनि महसुस गराउँछ।
सबैभन्दा पहिले त केटाहरुले शुभिंग गर्न जरूरी हुन्छ। तपाईं चाहनुहुन्छ भने ट्रिम मात्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नाले केटाहरु ह्यान्डसम देखिन्छन्। त्यस्तै, यदि तपाईं दाह्री राख्नुहुन्छ भने, आफ्नो दाह्री सेट गर्नुहोस्। यस बाहेक, तपाईंले आफ्नो आँखे भौंमा पनि ध्यान दिनुपर्दछ, किनकि यसले पनि तपाईंको लुक्स सुधार्नको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
यदि तपाईं जवान र सुन्दर देखिन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यसको लागि सही लुगा लगाउनु पर्छ। यसका लागि तपाईले नयाँ फेसनदार कपडा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो शरीरको बनावट अनुसार र स्किन कलर अनुसार पनि कपडा छान्न सक्नुहुन्छ। राम्रो ड्रेसअपले जो कोहिलाई पनि राम्रो देखिन मद्दत गर्छ।
यो कुरा त सबैलाई थाहा नै होला कि महिलाहरुलाई सुगन्ध अत्यन्त मनपर्छ। यस्तो अवस्थामा यदि तपाईं प्रेम दिवसको अवसरमा आफ्नो प्रेमिकालाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंले यसको पूर्ण ध्यान दिनुपर्छ। यसको लागि तपाईंले अत्तर प्रयोग गर्नुपर्छ।
तपाईंले आफ्नो कपालमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कपालमा राम्रो तेल, जेल वा वाक्स पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्को प्रयोगले कपाल राम्रोसँग सेट गर्न सकिन्छ। किनकि तपाईंको लुक्स कपालमा पनि अत्यन्त निर्भर गर्छ। त्यस्तै, आफ्नो जुत्तामा पनि ध्यान दिन जरूरी हुन्छ।
Last Updated on: February 9th, 2021 at 8:07 pm